နေတိုး နဲ့ ငုရင်ထရမ်ကပြောတဲ့ Mytel အကြောင်း
14 Jun 2018 . 2:46 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတုတ္ထမြောက် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာဖြစ်တဲ့ Mytel ရဲ့ Brand Ambassadors ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီဆုရှင် ရုပ်ရှင်မင်းသားနေတိုး နဲ့ ဗီယမ်နမ်မော်ဒယ် ငုရင်ထရမ်တို့က အခု Mytel ကနေ တရားဝင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်တဲ့ မိုက်တယ် SIM Card တွေအသုံးပြုရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို အခုလိုပဲ ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
အခု Mytel ရဲ့ Brand Ambassadors တွေဖြစ်တဲ့ နေတိုးနဲ့ ငုရင်ထရမ်တို့က Mytel ရဲ့ ကွန်ရက်ကို အရင်ဆုံးစမ်းသပ်အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အခု Mytel အသုံးပြုသူတွေဟာ ပထမဆုံး ၃ လမှာ 1500MB နဲ့ မိနစ် ၁၅၀ ဖုန်းပြောလို့ရမယ့် ဆုမဲတွေကိုလည်း ရရှိမှာဖြစ်သလို ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းအတွက်လည်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း Bonus တွေကို ရရှိဦးမှာပါ။ ဒါတင်မကသေးပဲ Double Benefits Plan ဖြစ်တဲ့ 5GB နဲ့ မိနစ် ၂၅၀ ဖုန်းပြောခွင့်ကို ၄၀၀၀ ကျပ်ထဲနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု Mytel ရဲ့ Promotion တွေက ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ကနေ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့အထိ အကျုံးဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး Promotion တွေအများကြီးရှိနေတဲ့ Mytel အကြောင်းကို နေတိုးနဲ့ ငုရင်ထရမ်တို့ကဘယ်လိုမျိုး ပြောပြသွားခဲ့သလဲ?
အရင်ဆုံး နေတိုးကတော့ “Mytel နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Feature ကတော့ VoLTE နည်းပညာပါ၊ ကျွန်တော် YouTube Video တစ်ခုကြည့်နေရင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဖုန်းခေါ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းလိုင်းကလည်း အသံကြည်လင်နေပြီးတော့ Video ကလည်း လုံးဝမထစ်သွားတာက တော်တော်လေးကို အံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါတင်မဟုတ်သေးပဲ နေတိုးက သူဟာ အခုလိုမျိုး Mytel ရဲ့ တစိတ်တပိုင်းမှာ ပါဝင်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပြီးတော့ Mytel ဟာ သာမန် Telecom Service တစ်ခုထက်တောင် ပိုတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mytel ဟာ နိုင်ငံ ၂ ခု ပူးပေါင်းတာလို့ပြောလို့ရပြီးတော့ သူဟာ အဓိကကျတဲ့မြို့ပြတွေတင်မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံတကာအထိပါ Mytel ရဲ့ 4G ကွန်ရက်ကနေ တစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေကို ဆက်သွယ်ပေးသွားမယ်လို့ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဗီယမ်နမ်က နာမည်ကြီးမော်ဒယ် ငုရင်ထရမ်ကလည်း သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံကို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်မကတော့ ဗီယမ်နမ်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ မိသားစုနဲ့ Video Call ပြောဖြစ်ခဲ့ပြီး သူတို့ကို ကျွန်မ ရန်ကုန်မှာ အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတာကို အသိပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်းက အရမ်းကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့ ကျွန်မတို့က ဒီနိုင်ငံက ဘယ်လောက်လှတယ်ဆိုတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွန်မဘာတွေလုပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကို နာရီနဲ့ချီပြီးကို ပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး Mytel ရဲ့ ကောင်းမွန်လှတဲ့ 4G ကွန်ရက်ကြောင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေထိုင်နေတဲ့ မိသားစုတွေကလည်း ပိုပြီး ဆက်သွယ်နိုင်တော့မှာပါ။”
Mytel ဟာ အသုံးပြုသူတွေအတွက် Shake App ကိုလည်း မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးတော့ အဆိုပါ App က အသုံးပြုရတာလည်း အလွန်လွယ်ကူပြီး အသုံးပြုသူတွေက သူတို့ရဲ့ ဖုန်းတွေကို Shake လိုက်ရုံနဲ့တင် iPhone X ၊ Scholarship Package ၊ Data Package တွေနဲ့ ဖုန်းပြောဆိုတဲ့ မိနစ်တွေကို လက်ဆောင်ရဦးမှာပါ။ အခု Shake ပြုလုပ်ပြီး လက်ဆောင်တွေကို သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့အထိ တစ်နေ့ကို ၅ ကြိမ် Shake လုပ်နိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စတုတ်ထမွောကျ ဆကျသှယျရေးအျောပရတောဖွဈတဲ့ Mytel ရဲ့ Brand Ambassadors ၂ ဦးဖွဈတဲ့ အကယျဒမီဆုရှငျ ရုပျရှငျမငျးသားနတေိုး နဲ့ ဗီယမျနမျမျောဒယျ ငုရငျထရမျတို့က အခု Mytel ကနေ တရားဝငျရောငျးခနြပွေီဖွဈတဲ့ မိုကျတယျ SIM Card တှအေသုံးပွုရတဲ့ အတှအေ့ကွုံကို အခုလိုပဲ ပွောပွသှားခဲ့ပါတယျ။
အခု Mytel ရဲ့ Brand Ambassadors တှဖွေဈတဲ့ နတေိုးနဲ့ ငုရငျထရမျတို့က Mytel ရဲ့ ကှနျရကျကို အရငျဆုံးစမျးသပျအသုံးပွုနတေဲ့သူတှလေညျးဖွဈပါတယျ။ အခု Mytel အသုံးပွုသူတှဟော ပထမဆုံး ၃ လမှာ 1500MB နဲ့ မိနဈ ၁၅၀ ဖုနျးပွောလို့ရမယျ့ ဆုမဲတှကေိုလညျး ရရှိမှာဖွဈသလို ဖုနျးငှဖွေညျ့ခွငျးအတှကျလညျး ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျး Bonus တှကေို ရရှိဦးမှာပါ။ ဒါတငျမကသေးပဲ Double Benefits Plan ဖွဈတဲ့ 5GB နဲ့ မိနဈ ၂၅၀ ဖုနျးပွောခှငျ့ကို ၄၀၀၀ ကပျြထဲနဲ့ ဝယျယူနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အခု Mytel ရဲ့ Promotion တှကေ ဇှနျလ ၉ ရကျနကေ့နေ စကျတငျဘာလ ၈ ရကျနအေ့ထိ အကြုံးဝငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။
အခုလိုမြိုး ဈေးနှုနျးသကျသာပွီး Promotion တှအေမြားကွီးရှိနတေဲ့ Mytel အကွောငျးကို နတေိုးနဲ့ ငုရငျထရမျတို့ကဘယျလိုမြိုး ပွောပွသှားခဲ့သလဲ?
အရငျဆုံး နတေိုးကတော့ “Mytel နဲ့ ပတျသတျပွီးတော့ ကြှနျတျောအကွိုကျဆုံး Feature ကတော့ VoLTE နညျးပညာပါ၊ ကြှနျတျော YouTube Video တဈခုကွညျ့နရေငျးနဲ့ သူငယျခငျြးတဈယောကျကို ဖုနျးချေါကွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ ဖုနျးလိုငျးကလညျး အသံကွညျလငျနပွေီးတော့ Video ကလညျး လုံးဝမထဈသှားတာက တျောတျောလေးကို အံ့သွဖို့ကောငျးပါတယျ။” လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဒါတငျမဟုတျသေးပဲ နတေိုးက သူဟာ အခုလိုမြိုး Mytel ရဲ့ တစိတျတပိုငျးမှာ ပါဝငျရတဲ့အတှကျ ဂုဏျယူမိပွီးတော့ Mytel ဟာ သာမနျ Telecom Service တဈခုထကျတောငျ ပိုတယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ Mytel ဟာ နိုငျငံ ၂ ခု ပူးပေါငျးတာလို့ပွောလို့ရပွီးတော့ သူဟာ အဓိကကတြဲ့မွို့ပွတှတေငျမဟုတျပဲ နိုငျငံတကာအထိပါ Mytel ရဲ့ 4G ကှနျရကျကနေ တဈဆငျ့ ပရိသတျတှကေို ဆကျသှယျပေးသှားမယျလို့ ထပျလောငျးပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။
ဗီယမျနမျက နာမညျကွီးမျောဒယျ ငုရငျထရမျကလညျး သူ့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံကို မြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ။
“ကြှနျမကတော့ ဗီယမျနမျမှာ ကနျြခဲ့တဲ့ ကြှနျမရဲ့ မိသားစုနဲ့ Video Call ပွောဖွဈခဲ့ပွီး သူတို့ကို ကြှနျမ ရနျကုနျမှာ အဆငျပွနေတေယျဆိုတာကို အသိပေးဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အငျတာနကျလိုငျးက အရမျးကိုကောငျးမှနျပွီးတော့ ကြှနျမတို့က ဒီနိုငျငံက ဘယျလောကျလှတယျဆိုတာနဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကြှနျမဘာတှလေုပျဖွဈမလဲဆိုတာကို နာရီနဲ့ခြီပွီးကို ပွောဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အခုလိုမြိုး Mytel ရဲ့ ကောငျးမှနျလှတဲ့ 4G ကှနျရကျကွောငျ့ နိုငျငံရပျခွားမှာ နထေိုငျနတေဲ့ မိသားစုတှကေလညျး ပိုပွီး ဆကျသှယျနိုငျတော့မှာပါ။”
Mytel ဟာ အသုံးပွုသူတှအေတှကျ Shake App ကိုလညျး မိတျဆကျပေးခဲ့ပွီးတော့ အဆိုပါ App က အသုံးပွုရတာလညျး အလှနျလှယျကူပွီး အသုံးပွုသူတှကေ သူတို့ရဲ့ ဖုနျးတှကေို Shake လိုကျရုံနဲ့တငျ iPhone X ၊ Scholarship Package ၊ Data Package တှနေဲ့ ဖုနျးပွောဆိုတဲ့ မိနဈတှကေို လကျဆောငျရဦးမှာပါ။ အခု Shake ပွုလုပျပွီး လကျဆောငျတှကေို သွဂုတျလ ၈ ရကျနအေ့ထိ တဈနကေို့ ၅ ကွိမျ Shake လုပျနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ။